Saddaam Oo La Ogaaday In Aanu Ku Jirin Qabrigii Lagu Aasay Iyo Tuhunnada La Xidhiidha La Bixista | Maalmahanews
Saddaam Oo La Ogaaday In Aanu Ku Jirin Qabrigii Lagu Aasay Iyo Tuhunnada La Xidhiidha La Bixista
26/04/2018-Hargeysa-(Maalimahanews)-Maalin ciid Caraf ahayd oo ku beegnayd 30kii Bishii laba iyo tobnaad ee sannadkii 2006 ayaa madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddaam Xuseen lagu fuliyey xukun dil daldalaad ahaa oo ay maxkamadi ku ridday. Isla habeennimadii la dilay ayaa ay xukuumadda Ciraaq soo saaray qoraal rasmi ah oo qoyska Saddaam Xuseen ee maydkiisa la siiyey ku qasbaysa in ay dhaqso ugu aasaan tuulihii uu u dhashay oo Cawjah lagu magacaabo. Qoyska oo amarkan fulinaya ayaa aas ay ka soo qayb galeen dad kooban oo qoyska iyo hoggaamiye dhaqameedka qabiilka uu ka dhashay isugu jira, waxa ay Saddaam Xuseen ku dhex xabaaleen hoolka soo dhoweynta ee xarun dawladeed ay xukuumaddiisu ka dhistay tuulahan.
Waxaa xiise gaar ah leh in Saddaam Xuseen oo dilkiisii laga joogo 12 sano, ay dadka reer Ciraaq qaar badan oo ka mid ahi rumaysan kari waayeen in Saddaam Xuseen la dilay. “Waa khiyaamo, Saddaam Xuseen cidi ma dilin, waxaa la dilay mid ka mid ah dadkii raggii aadka ugu ekaa ee uu ku dhuuman jiray.